एकताका विषयमा निर्णायक वार्तामा बस्दै एमाले–माओवादी, के होला आज ? « Light Nepal
एकताका विषयमा निर्णायक वार्तामा बस्दै एमाले–माओवादी, के होला आज ?
Published On : 17 April, 2018 9:44 am
काठमाडौं, ४ बैशाख । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबिच पार्टी एकताका लागी बनेको एकता संयोजन समितिको बैठक मंगलबार बस्न लागरिहेको छ । सोमबार माओवादी अध्यक्ष पूष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबिच २ घण्टा लामो संवाद भएपनि विवादीत विषयमा सुहमति जुटेको छैन ।
एमाले चुनावी अभियानमा जस्तै ६०/४० को अवस्थामा पार्टी एकताको छलफल गर्ने तयारीमा रहेको छ भने माओवादी बराबरीको एजेण्डामा । अरु विषय मिले चुनाव चिन्हका बारेमा माओवादी लचक रुपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा रहेको माओवादी नेताहरुले बताउने गरेका छन् ।